Zuru ezu Budgerigar ozuzu Baby Care 🐣 - Ne gerekir?
Ndị Ọkachamara Anyị
JKỌ AJ QJ.
Nbanye Debanye aha
Zuru ezu Budgie ozuzu nwa nkita Care 🐣
Olee otu izu budgies? Mmebe na nlekọta nke Budgerigar
Anu ulo na anumanu
Ọ bụghị onye ọ bụla maara na budgie nwere ike ịbụ ezigbo enyi. Kedu ezigbo ndị ha bụ. ? Onye na-achọghị ịhụ ụmụ ha ma bulie ha… Ọ bụ ihe na-atọ ụtọ. Ka anyị hụ otu anyị nwere ike isi nyere aka nke a site na ịchekwa ahụike nke nnụnnụ anyị na nnụnụ anyị.
Budgerigars ruru okenye na ọnwa 7-8. Ndụ ha dịkarịa ala afọ 8-10. Ha bu ndi Austrian na mgbọrọgwụ ha sitere na parrots. Ha maara nke ọma ime ka anyị niile chịa ọchị ma bụrụ ezigbo ndị enyi anyị na nka okwu ha. Malesmụ nwoke budgerigar dị iche iche nwere ike ịmụ okwu ọsọ ọsọ. Okwu ha nwere ike ịmụta bụ ma ọ dịkarịa ala okwu 20 ma ọ dịkarịa ala 1.000.
Gịnị ka anyị kwesịrị ime maka budgerigar mating?
N'ezie, anyị nwere ndepụta ndepụta site na otu esi eme ka budgerigar mating, nke nwere ọtụtụ ụzọ na ọnọdụ. N'ebe a, anyị ga-anwa ịkọwa ya n'ụzọ zuru ezu na ntụnye anyị.
Budgerigars bụ nnụnụ pụrụ iche. Ọ bụrụ na a zụọ ya nke ọma, ọ ga-abụ ezigbo enyi gị. Edemede pụrụ iche banyere nke a ga-anọnyere gị n'oge na-adịghị anya. Ka anyị hụ otu anyị nwere ike isi nye ha gburugburu ebe obibi na ọnọdụ kwesiri ịlụ ...
Maka budgerigar mating ne gerekir?
Ọ dịkarịa ala ọnwa 7-8 budgies
Ahụmahụ n'etiti ha
Ebe dị jụụ ma dị mma
Nri dị mma
Nnukwu na onu dị ọcha
Nnụnụ astara nri / dobe / vitamin mgbakwunye
Ọnyịnye onu n'elu ọkwa anya
Budgerigar afọ ịlụ
Lụ di ma ọ bụ nwunye ga-ekwe omume mgbe ọ dịkarịa ala ọnwa 7-8. Ezigbo afọ bụ mgbe afọ 1 gachara.
Budgerigar ụzọ enyemaka inyeaka
Ka anyị mepee ndepụta nke usoro na ọnọdụ dị mma anyị kwuru ugbu a. Anyị ga-enwe ebumnobi aro gị.
Nhọrọ nchịkọta nri
| Ntụle nri dị mma na aro
MyYem Nhọrọ Ezigbo Mkpụrụ Mkpụrụ Budgie
Ihe kpatara anyị ji ahọrọ nri a bụ na a na-akwado ndị na-eme nri na-echebara omume nri anya na agwa. Isi nri ndị nnụnụ a chọrọ bụ na nri a. Na ya pụrụ iche ekpochi nkwakọ, ọ na-enye ọhụrụ oriri ruo ogologo oge. Iji chebe ndụ nke mkpụrụ osisi, ha na-enye mkpụrụ ya na ngwugwu dị iche n'ime ngwaahịa ahụ.
Ọdịnaya nke ngwugwu:
Oats Safflower (nke oge)
Niger mkpụrụ Mkpụrụ osisi (apụl, unere, aki oyibo, kiwi, painiapulu, strawberry, pọọpọ, guava, mulberry)
Dị ka o kwesịrị ịdị, mkpụrụ osisi ejiri nwere ike ịdị iche dabere na ọnọdụ mmepụta.
Ihe eji a iyi bu ihe ndia:
Enwere mkpụrụ osisi na ngwugwu dị iche na ngwaahịa a. Ekwesiri igwakota ya na 2% nke nri isi na akuku nke enwere ike iri na 3-3 rue otutu. Ọ ga-eje ozi na iche iche feeder na-enweghị agwakọta. A ga-echekwa mkpụrụ ndị ọzọ fọdụrụ na nkwakọ ngwaahịa nke ya na ngwa nju oyi na + 4C Celsius ma agwaghị ya na isi nri. E kwesiri ịchekwa ihe oriri bụ isi na gburugburu ebe dị jụụ na enweghị anwụ site na imechi mkpọchi na ngwugwu nke ya.
Amaokwu-Laga Budgerigar Nri
A kwadebewo nri a n'ụzọ pụrụ iche maka budgerigars. Ọ bụ agwakọta, 100% nri sitere n'okike nwere mkpụrụ osisi na ọka gbara agba, nwere ụdị vitamin na mineral niile. Site na ọdịnaya ya pụrụ iche, ọ na-eme ka nku nnụnụ gị wee dị mma ma dị ndụ ma na - eme ka ndụ nnụnnụ gị dịkwuo mma. A na-etinyekwa nkwakọ ngwaahịa zippered pụrụ iche na ndepụta a. A na-etinye usoro mkpofu oxygen pụrụ iche ejiri n'oge nkwakọ ngwaahịa. Ọ na-eme ka ngwaahịa a dị ọhụrụ ruo ụbọchị mmebi ya.
Oyi kpara akpa
Ihe eji a iyi di nma bu ihe ndia;
A na-atụ aro ka ị tinye 2 tablespoons nke ndepụta kwa nnụnụ kwa ụbọchị. Na-echekwa ebe dị jụụ ma kpọọ nkụ.
Ogige Ngwakọta Budgerigar Nri N'ezie, ngwaahịa a ka ejikerela nke ọma. Ihe dị iche nke na-adọrọ uche anyị ebe a; Ndị Budgerigars na-emepụta ndepụta dị iche iche dabere na afọ ole ha dị.
Ebe ọ bụ na ihe egwu nke nnụnụ gị na nri na-emeghe dị ukwuu, anyị na-akwado ka ịhọrọ nri ndị emechiri emechi. Ekwesighi ichefu ya banyere ihe nchebe na ahu ike nke na enye ahu ike na vitamin.
| Best Budgie Vitamin Drops
Amaokwu-Laga Canto-Vit Liquid Bird Nnukwu mmụba 30 Ml
Saccharomyces cerevisiae yist
Vitamin nke PP
Na mgbakwunye, ihe mgbakwunye vitamin a na-emekwa ka ọchịchọ ịmụba.
Budgerigar ihe oriri na-edozi ahụ
Ọ bụrụ n’ịchọrọ ka nnụnnụ gị rie nri ahụike karịa, anyị ga-enwe aro ole na ole maka gị. Inye nnụnụ gị ezigbo mma ga-enye ya nri nke ọma, mana enweghị ike inye ya nri nke ọma. I nwekwara ike inye ya mgbakwunye ndị ọzọ. Ajula oke, gbasaa ya ruo izu. Inwere ike inye akwa pere mpe nke sie sie ike. I nwekwara ike ịhapụ ya ka o rie mkpụrụ osisi ụfọdụ dị ka apụl na oroma. Ha nwere ike iri obere ihe ọ bụla. Ewezuga ihe dị ụtọ na nke na-atọ ụtọ, n'ezie.
Budgerigar nri ozuzu
Ọ bụrụ na-ịchọrọ, ịnwere ike ịzụta ngwaahịa mechiri emechi ozugbo. Ọzọkwa, anyị họọrọ ngwaahịa nke anyị nyochara wee chọpụta na ọ dị mma maka gị.
Quik Budgerigar Na-eri Nri
Gụnyere na ngwugwu:
Ngwakọta vitamin (ọka wit, akwa na ngwaahịa akwa, shuga, mmanụ sunflower mmanụ)
I nwekwara ike ịkwadebe ya n'ụlọ ma ọ bụrụ na ịchọrọ.
Ha nile pere mpe;
Mkpụrụ osisi Twig
Nke a ga-eme ka kpo oku dịkwuo elu.
Ọ bụrụ na ị ga-akwadebe ndepụta nri mkpụmkpụ dị mkpirikpi;
I nwekwara ike ịgbakwunye apụl.
Agbanyeghị, ekwesịrị ịwepụ nri ahụ na onu ọzọ n'ime awa 1-2, ma ọ bụghị ya, nri ahụ nwere ike bụrụ nsi nri. Ka anyị leba anya na ụdị nke ọzọ nke azụ, ụyọkọ na-ekpo ọkụ.
Budgerigar kpo oku dobe
Alfa Fox Veterinary Power Bird Warming Vitamin Drop
Anyị chere na ị gụọla nkọwa banyere ngwaahịa ndị a, mana ọ ga-amasị anyị ịkpọtụrụ ebe a.
Ebe ọ bụ na ngwaahịa a nwere vitamin D3, enweghị ike iji ya na ngwaahịa nwere vitamin D2, amachibidoro iji ya.
N'ikpeazụ, e nwere ụdị usoro na-esonụ nke superheating;
Budgerigar kpo oku vitamin emeju
Nekton-E, Nekton-S, Nekton Msa Superheater na spam na-eme ka mgbakwunye Vitamin
Nke ọ bụla n’ime ha na-enye onyinye onye ọ bụla. Ihe ọmụma zuru ezu adịworị n'okpuru ngwaahịa ndị a. Ihe mgbakwunye vitamin ndị a, bụ nke a mụworo nke ọma n'okwu a, enwere ike ịmalite na Nekton-E. N'ezie, ọ bụrụ n'ezie na ịchọrọ ọrụ a, ọ ga-aba uru ịzụta ngwaahịa 3 anyị gụrụ dị ka set.
Akwụ maka nne budgie
Holiday Budgerigar akwu (na akwụ)
Akpịrịkpa na-egbochi nkpuchi hip. Akwụ a nwere mkpuchi abụọ.
Plastic efọk size n'ime akwu a:
Obosara - 17 cm
Ogo - 19 cm
Elu - 8,5 cm (Footkwụ - 2,5 cm)
Hà a akwu:
Ogologo - 21 cm
Obosara - 20 cm
Ogo - 20 cm
Ime budgerigar akwu n'ụlọ
Ọ bụrụ na ị bụ otu n’ime ndị na-ekwu na m nwere ike ime ya na mbọ ma nwee ọ enjoyụ na ọrụ a, anyị achọtala vidiyo vidiyo maka gị.
N'ikpeazụ, anyị na-arịọ gị ka ị mee ụlọ ahụ ka ọ bụrụ nnukwu ndụ.
Olee otú anyị si mara ma budgerigar chọrọ ịlụ?
Ọ bụrụ na ị ghọtaghị, anyị ga-achọ ihe na azụmaahịa a 🙂 Nnụnụ nwoke ga-etinye aka n'omume ndị ọzọ ga-adọta uche onye ọ bụla nọ n'ụlọ ahụ iji dọta uche nnụnụ nwanyị.
Ọrụ mmadụ siri ike! Dabere na dọkịta ezé, nwoke budgerigar dịkwuo njikere ịlụ. Mgbe nwa nwoke budgie dị njikere, ọ na-achọ ịdọta nnụnụ nnụnụ kwa ụbọchị, ikekwe ọbụna ọnwa. Ha nwere ike igosi mmegharị ahụ nke nwere ike iju gị anya. Dị ka ịhapụ ịhapụ akụkụ nwanyị, na-ele ọdụ ya anya, na-emetụ ubu ya na ọnụ ya, na-efegharị ara n'ime ụlọ, na-akụ mgbịrịgba na mgbịrịgba oge niile.
Na kwụ n'ahịrị, ọ na-egosi onwe ya na-enweghị nnukwu mbọ. Ọ na-eweli wolf ya ma tụpụ isi ya azụ. Atingatingụ nwanyị na-eme tupu ya eweree sekọnd. N'ezie, ọ bụrụ na nwoke budgie adịghị uche ozi mesajı Mating nwere ike ugboro ugboro maka 5-6 afọ. Nọmalị budgie bụ mating oge na mmiri. Agbanyeghị, ebe ọ bụ na ogo ụlọ anaghị adalata n'okpuru ogo 20, mating nwere ike ime na mpụga oge opupu ihe ubi. N'ezie, mkpali nke anyanwụ bụ n'ezie ihe dị mkpa.
Kedu akwa ole ka nwa osisi na - eme?
Nwanyị budgerigar nwere ike itinye akwa 5-12 dabere na ahụ ike ya, ahụike nke nnụnụ nwoke, yana ọnọdụ.
Fa nsɛm a ɛwɔ nkyekyem 5-12 no di dwuma bere a woresusuw asɛm no ho no. Maka nke a, ọ dị mkpa ka ị mara ihe ị ga-eme tupu ị gụchaa, ma chebe ahụike nke nnụnụ gị. Ihe enwere ike ime tupu, olee otu esi echekwa ahụike ha, anyị kwuru n'elu.
Mgbe budgerigar dina akwa mgbe akwachara?
The incubation oge nke nwanyi budgerigar bụ 18-21 ụbọchị. Nwanyị budgerigar ga-achọ gị dịka oke nnụnụ nọ na incubub. Enwere nsogbu ị kwesịrị ị paya ntị na.
Oge ntinye nke Parakeet bụ ụbọchị 18-21. Offọdụ n'ime ha nwere ike ịmụ nwa na etiti ụbọchị 1-2. Ọ bụrụ na nnụnụ ahụ na-enupụ isi ma ọ bụ nwee obere calcium n'oge oge njikọta, ọ nwere ike iri ụfọdụ àkwá ya. Atụla egwu, nke a bụ ihe a na-ahụkarị. Chọghi nnụnnụ gị inupụ isi. Ya mere, ọ ga-adị mkpa ka ị nye ebe dị jụụ mgbe ị gachara. Kwesịrị ilebara àkwá anya ugboro ugboro.
Nwoke nnụnụ na-eri nri ya na nne ya. Mana oge ụfọdụ ọ bụrụ na nke a emeghị, ị nwere ike ịme mgbakwunye. Oge ụfọdụ, ịkwesịrị ịkwado nnụnnụ nne gị site na iri nri siri ike. Ndị a nwere ike ịbụ akwa, semolina, biscuits. I nwekwara ike ilele usoro mmepe nke akwa. Ya mere, ọ bụrụ n’ịchọpụta àkwá ndị na-adịghị na ya ma kpochapụ ha, ike ga-agwụ nne nke nnụnụ. Ewezuga ihe ndị a, ịkwesighi ichegbu nne nnụnụ. Agaghị enwe ikuku ikuku dị ka ikuku, fan, ntụ oyi n'ime ụlọ ahụ. Ma mgbe amuchara nwa ma oburu na enweghi omumu.
Mmebe akwa Budgerigar
Bybọchị site na Budgerigar akwa akwa na-egosi na tebụl.
Developmentbọchị-ụbọchị mmepe nke budgerigar akwa
N’ụbọchị nke isii ma ọ bụ asaa, àkwá ahụ apụta, jiri nwayọọ ma kpachapụ anya wee kpughee akwa ahụ. Site na ijide oriọna akwa, ị nwere ike ịkọwa usoro mmepe dị n'okpuru.
Baby na-elekọta nwa
Willwa ga-abụ nke gị 🙂 N’ezie, ị naghị enwe ndidi, ndị ị hụrụ n’anya abịala n’ụwa. Mana n’ime izu 4-5 nke mbụ, ị ga-ahapụrụ ya n’aka nne ya. Nwere karịa mgbe e mesịrị!
Babiesmụaka ahụ apụtaghị na ngwụ ma ọ bụ ọbụ akwụ akwụ ruo izu 4-5 mgbe amụrụ ha. Onwere usoro mmuta nke ndi nne na nna ha ga enweta. N'ihi ya, ha ga-enwe ike igbo mkpa ha n'onwe ha. Mana ọ bụrụ na ịnweghị ụdị ihe ahụ mgbe izu 4-5 gachara, ị ga-amata ha maka izu 1 karịa. Mgbe ahụ ọ bụ oge gị.
Oge ọzụzụ anyị na-enweghị ndidi nwere ike ịmalite! Ọ bụghị nsogbu ịpụ n'èzí. Na mbu, ha nwere ike itu gi egwu. I nwedịrị ike ịkọ na ha nwere ike ịtụ ndị na-abụghị gị ụjọ. Mana ọ bụrụ na anyị agbakwunye gị na ndị mụrụ gị ịbịaru gị nso na ọgwụ a na-akpọ oge, ha ga-amata gị ọsịsọ. You na-eche ogologo oge nnụnnụ gị ga-eto na izu 4-5?
Budgie nwa ụbọchị
Olee otú ọ ga-adị? Kwere m, ị ga-ekpori ndụ! Mgbe ị na-ele vidio anyị ga-akwado, ị ga-ahụ ohere ndị ọzọ nwere ike ime gị.
Ọ dị mkpa ka anyị ghara ịda mbà! Mgbe ahụ, anyị na-ezitere gị ọchịchọ anyị ugbua! Nwere ike ide ahụmịhe gị gbasara ngwaahịa anyị kwadoro nke ọma na nkwupụta.
Bịanụ, jiri aha budgie gị kwuo ma eleghị anya ụmụ ọhụrụ ha. Kwere m, anyị ga-enwe ọ happụ karịa ka ị chere. ?
ND THE ỌM CONM THE NA-EKWU EZIOKWU NKE AKW OKWỌ ANY.
Abụ m onye gụsịrị akwụkwọ na Visual Communication Design. Ne GerekirAbụ m onye nchoputa na njikwa nke.
Dee azịzakagbuo zara
Na adreesị email gị agaghị bipụtara. Chọrọ ubi * a kara ha akara
Zọpụta aha m, email na adreesị weebụ na ihe nchọgharị a maka oge ọzọ m ga-aza.
Mmụta na Nkwukọrịta
Nkwurịta okwu dị irè
Andlọ na Ogige
Arts na Ntụrụndụ
Nlekọta Onwe na yledị
Gbọ ala na ụgbọ ala ndị ọzọ
Ihe kacha ọhụrụ
Ajụjụ ọnụ nke Koray Tuğberk Gübur na Holistic SEO
Ajụjụ ọnụ Ayhan Karaman na SEO
Gịnị bụ SEO? Anyị na-enye Free SEO Analysis 🎁
Gị na di ma ọ bụ nwunye gị soro ụlọ nọrọ n'ezi echiche 20
Soro nwa gi soro ulo gi nwee ezigbo echiche 27
Iji chọpụta ihe ọ na-ewe
Ne Gerekirga lee!
Ajụjụ ọnụ nke Koray Tuğberk Gübur na Holistic SEO 30 / 05 / 2021
Ajụjụ ọnụ Ayhan Karaman na SEO 30 / 05 / 2021
Gịnị bụ SEO? Anyị na-enye Free SEO Analysis 🎁 30 / 05 / 2021
Gị na di ma ọ bụ nwunye gị soro ụlọ nọrọ n'ezi echiche 20 17 / 05 / 2021
Kedu ka onye nwere nkụchi obi kwesịrị isi rie nri? 1 Zaghachi - 1 Ntuli aka
Kedụ ka anyị si eri nri siri ike n'oge ọrịa a na-efe efe? 1 Zaghachi - 1 Ntuli aka
Ndenye Response Nkebi